Isi: 16 x 5 x 14cm, ma ọ bụ nhazi
A na-emezi ihe enyemaka mbụ na akụkụ 16x5x14cm, dị mfe iji buru ma buru maka ọrụ mpụga (njem njem & ịma ụlọikwuu), ụgbọ ala, ebe ọrụ, ọfịs ma ọ bụ ụlọ.
n'ime ihe owuwu ga-eme ka nhazi dị mfe maka ọgwụ gị / ihe mberede.
Ọzọkwa anyị nwere ike ibipụta gị logo na ahu, ma ọ bụ sewn labeelu n'ime.
Anyị nwere OEM & ODM ọrụ ị ga-enye, iji hazie ogo dị iche iche, ihe, agba, ihe owuwu dị n'ime, biko kpọtụrụ anyị ebe a.
Ngwaahịa a bụ naanị maka akpa, ọ bụghị gụnyere enyemaka enyemaka mbụ.
Osote: Igbe nkpuchi nkpuchi
Ce Asambodo Sock Aid Kit
Akwa Ogo Aid Aid Kit
Akpa akpa Enyemaka Medical
Ugbo ala Akpa Ahụike Medical Medical
Mini Akpa Enyemaka Kit Medical Bag
AKW AKWỌ AKWIDKWỌ AKW FKWỌ FB006
AKW AKWỌ AKWIDKWỌ AKW FKWỌ FB004